Mary Aviles sy ny fomba hahombiazana amin’ny alàlan’ny fandrindrana ny asa sy ny fiainam-pianakaviana · Global Voices teny Malagasy
Mary Aviles sy ny fomba hahombiazana amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny asa sy ny fiainam-pianakaviana
Voadika ny 11 Jolay 2019 6:22 GMT
Mary Avilés, sary tao amin'ny pejin'ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices.
(Lahatsoratra tamin'ny volana Desambra 2014)
Fantaro i Mary Avilés, ilay toniandahatsoratray aty Amerika Latina, toerana noraisiny tamin'ny volana Oktobra 2014.
Mbola vaovao taminy ny Global Voices tamin'izany fotoana izany, saingy tao anatin'ny herinandro vitsy dia efa nahazatra azy ny tontolon'ny GV ary efa azo heverina ho anisan'ny vondrom-piarahamonintsika izy amin'izao fotoana izao.
Teraka tany Venezoela, nonina tany Etazonia i Mary nanomboka hatramin'ny taona 2001, izay nanombohany naka ny mari-pahaizana amin'ny Asa Fanaovan-gazety tao amin'ny Oniversite Iraisam-pirenena Florida ao Miami.
I was fortunate enough to be chosen as a Knight Fellow 2013. I applied because I needed a boost in my career, in the media industry. Among very deep changes, and the idea of innovation and leadership this Stanford University-managed program ran in me. The truth is it was a wonderful experience, it gave me the chance to meet incredible people and gain tools to try our in my field of expertise.
Tsara vintana aho fa voafidy ho Knight Fellow 2013. Nisoratra anarana aho satria nilaiko ny tosika ho an'ny asako amin'ny indostrian'ny fampitam-baovao. Tao anatin'ireo fanovana lalina sy ny hevitra momba ny fanavaozana sy ny fitarihana, nahaliana ahy ity fandaharam-pampianarana izay notantanan'ny Oniversiten'i Stanford ity. Traikefa tena nahafinaritra tokoa izany raha ny marina, nanome ahy ny vintana hihaona amin'ireo olona mahagaga sy hahazo fitaovana hanaovana andrana ny sehatra mifanandrify amin'ny fahaizako.
Iray amin'ireo mpiara-manorina ny Venezuela Decoded i Mary, izay teraka avy amin'ny filàn'ireo mpiara-miasa aminy sasany manokana sy avy aminy nandritra ny hetsi-panoherana tany Venezoela tamin'ny volana Febroary 2014. Tao anatin'ny tebiteby ny gazety nentim-paharazana Venezoeliana noho ny fiovana tamin'ny indostria sy ny tsindry avy amin'ny governemanta satria niha-maro ny sivana ary nisy mihitsy aza ny fanivanan-tena izay tena ratsy kokoa. Nanapa-kevitra izy ireo ny haka ny vaovao ilaina tao amin'ny tambajotra sosialy, indrindra fa ny Twitter, niaraka tamin'ny hevitra hampiditra ity fantsona ity mba hahazoana fandrakofam-baovao betsaka kokoa momba ny hetsika. Nodinihin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena maherin'ny 50 ny tranonkala ary anisan'ny voafidy ofisialy tamin'ny loka Gabriel Garcia Marquez ho an'ny Fanavaozana.
Ankoatra izany rehetra izany, vitan'i Mary ny nitaiza ny zanany telo vavy. Hainy ny mandanjalanja ny asany sy ny fianakaviany na dia miasa ao an-trano aza izy nandritra ny fito taona. Fantatr'ireo zanany vavy fa mahafaly ny reniny ny asa ataony rehefa nahita azy niasa foana izy ireo. Amin'ny maha-renim-pianakaviana manan-kambo azy, tiany ireo zanany vavy mba hanana asa matihanina ihany koa, ary mba hanatanteraka ny nofinofiny.
Tongasoa eto amin'ny fianakaviamben'ny Global Voices, Mary!